Bios Password - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော့် Netbook Prolink TA-009 ပါဝါဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တန်းပြီး Bios Password တောင်းနေလို့ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပြောပေးကြပါအုံးဗျာ
အော်..ဘယ်သူကလိသွားတာလဲ...... Desktop မှာတော့ Bios Battery ကိုဖြုတ်ပီး Power On လိုက်ရင်တော့ ရှင်းသွားတယ်.... Laptop မှာဆိုရင်တော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ.....
လူဇိုး Battery ဖြုတ်မလို့ အဖုံးဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားသေးတယ်။ ဖြုတ်ရတာ ခက်လို့ အကူအညီတောင်းတာကိုဂျ
ဟီဟီး..... Laptop ကလက်၀င်တယ်....နော်.. ဖြုတ်ရတာ...... ဖြုတ်လိုက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်..
ဒီနေရာတွေမှာအရင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ Myanmar Tutorial sites တွေပါပဲ။ မရရင်တော့
ဒီမှာတော့တွေ့ထားတာတွေရှိတယ်။ ပထမဆုံးစက်ဖွင့်တဲ့အခါ BIOS ထဲကိုဝင်ပြီး BIOS Manufacture ကိုကြည့်လိုက်ဗျာ။
http://www.technibble.com/downloads/misc/BIOS320.EXE BIOS Password Cracker ကို Download ဆွဲ။
Start > Run and type: cmd
Now type the name of the file you just downloaded, if you haven’t changed the name just type in: bios320.exe သူပြောသလိုပေါ့။
BIOS320.exe မှာ Cracker ကိုရွေး --> ကိုယ့် BIOSကိုရွေးရုံပဲ။ အဲဒိမှာ 1, 2,3လာရွေးခိုင်းရင် 1 ပဲရွေးပေးလိုက်ပါ။